October 5, 2021 - Online Hartha
အဘွားအိုရဲ့ကားနောက်ကို ပျားအကောင် အုပ်စုလိုက် ၂ရက်အကြာ တကောက်ကောက်လိုက်နေလို့ စစ်ဆေးကြည့်လိုက်သောအခါ
October 5, 2021 by Online Hartha
၆၈ နှစ်အရွယ် Carol Howarth လို့ခေါ်တဲ့ အဖွားဟာ သူမရဲ့ကားကို Wales နိုင်ငံက Haverfordwest မြို့လယ်မှာ ကားခနရပ်ထားပြီး အနီးအနားက Supermarket မှာ ဈေးဝယ်ထွက်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ သူမ ရပ်ထားတဲ့ကားဆီပြန်လာတဲ့အခါမှာ ကားရဲ့အနောက်ဘက်က ထောင်ပေါင်းများစွာသောပျားတွေဖုံးလွှမ်းနေတာကို တွေ့မြင်ခဲ့ပြီး ထိတ်လန့်သွားခဲ့ပါတယ် ။ ကျေးဇူးတင်စရာမှာ ပျားမွေးမြူသူသုံးဦး၊ အမျိုးသားဥယျာဉ်မှူးတစ်ဦး နဲ့ ပြည်သူများအပါဝင် ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေက ပျားတွေကို ဖမ်းဆီးပြီး အထူးပျားမွေးမြူသူတွေက သေတ္တာထဲမှာ ချုပ်ထားခဲ့လိုက်ပါတယ် ။ သူမအိမ်ပြန်ပြီး နောက်တစ်နေ့မှာ သူမရဲ့ကားကို ပျားအကောင် ၂၀၀၀၀ လောက် ထပ်မံဖုံးထားခဲ့တာကြောင့် Mrs Howarth က ပျားမွေးမြူသူတွေကို ထပ်မံပြီး ခေါင်ဆောင်ကာ ဖမ်းဆီးစေခဲ့ပါတယ် ။ ဒုတိယအဖြစ်အပျက်ပြီးနောက် ပျားမွေးမြူသူတစ်ဦးက “ပျားမိဖုရားက … Read more
ဆေးကုစရာငွေမရှိလို့ တဲအိမ်လေးထဲမှာဝေဒနာကိုခံစားရင်း ဒုက္ခခံနေရတဲ့ ကလေး၂ယောက် အမေ
“ဆေးကုစရာငွေမရှိလို့ တဲအိမ်လေးထဲမှာဝေဒနာကိုခံစားရင်း ဒုက္ခခံနေရတဲ့ ကလေး၂ယောက်အမေ ” တေးရေးမင်းကိုတို့ နယ်လှည့်နှလုံးလှဆရာဝန်များအဖွဲ့ကစက်စက်ယိုဘုန်းဘုန်းဖိတ်ကြားလို့ ဒီကနေ့သုံးရက်မြောက်ဆေးကုခရီးစဉ်အဖြစ်ရခိုင်ရိုးမှတောင်တန်းပေါ်မှာဆေးကုကုသိုလ်ယူရင်း မိုးမလုံလေမလုံတဲအိမ်လေးထဲမှာနာတာရှည်ဖျားနာပြီးဒုက္ခရောက် နေတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်အမေရောဂါသည်ကို သွားကြည့်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ “သူ့အမျိုးသားက ဝါးခုတ်ရင်းအသက်မွေးရသူ၊ ဝါး၂၅လုံးတစီးရောင်းရမှ ငွေတထောင်ပဲရတယ်။ တောနက်ထဲခက်ခက်ခဲခဲတိုးပြီးမှရခုတ်လို့ရတဲ့ဝါးလေးတွေ ၊အလုံး၂၅လုံးရောင်းမှငွေတထောင်ပဲရတယ်ဆိုတော့ သူတို့မိသားစုလေးဘယ်လိုဆေးကုနိုင်တော့မလဲ၊ဒေါက်တာကဆေးရုံအမြန်တင်ပေးမှအသက်ရှင်မယ်ဆိုတော့ ဘုန်းဘုန်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီး ဆေးရုံချက်ချင်းတင်ပေးလိုက်ရတော့တယ်.။မိဘနှစ်ပါးက ဆေးရုံတက်ရပြီဆိုတော့ တဲအိမ်စုတ်လေးထဲမှာ သနားစရာလူမမယ်ကလေးလေးနှစ်ယောက်တည်းကျန်ခဲ့ရရှာတယ်။ လူတယောက်ကို တာဝန်ယူဆေးရုံတင်ပေးရပြီဆိုတာနဲ့ သူတို့မိသားစုတစုလုံးအတွက်ပါ စဉ်းစားပေးရတော့တယ်၊ ကျွန်တော့်မှာလည်းကားဆီဖိုး ဆေးဖိုးထိနေတာနဲ့ သူတို့မိသားစုအတွက်ဘုန်းဘုန်းကိုပဲစိုက်ခိုင်းထားလိုက်ရတယ်၊ ခုချိန်လူ့အသက်တွေကယ်နိုင်ဖို့ ဆိုတာ ငွေများများလက်ထဲရှိမှ ကယ်နိုင်မှာပါ။ ကဲဗျာ …ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရှိတာလေးဖဲ့ပြီး ဒုက္ခကြုံတွေ့နေရသူတွေကို ကယ်ကြပါဦးစို့ဗျာ” လို့ တေးရေးမင်းကိုက လူမူကွန်ယက်မှာရေးသားထားပါတယ်။ Photo-တေး​ရေးမင်းကို #36myanmarchannel Unicode Version “ဆေးကုစရာငှမေရှိလို့ တဲအိမျလေးထဲမှာဝဒေနာကိုခံစားရငျး ဒုက်ခခံနရေတဲ့ ကလေး၂ယောကျအမေ ” တေးရေးမငျးကိုတို့ နယျလှညျ့နှလုံးလှဆရာဝနျမြားအဖှဲ့ကစကျစကျယိုဘုနျးဘုနျးဖိတျကွားလို့ ဒီကနသေုံ့းရကျမွောကျဆေးကုခရီးစဉျအဖွဈရခိုငျရိုးမှတောငျတနျးပျေါမှာဆေးကုကုသိုလျယူရငျး မိုးမလုံလမေလုံတဲအိမျလေးထဲမှာနာတာရှညျဖြားနာပွီးဒုက်ခရောကျ … Read more
ချောမောလှပတဲ့ ဘဏ်မန်နေဂျာမိန်းကလေးကို ချစ်ကြိုက်မိသွားတဲ့ အသက်၇၀အရွယ် ဘီလျံနာသူဋ္ဌေးကြီးရဲ့အဖြစ်
ခြောမောလှပတဲ့ ဘဏျမနျနဂြောမိနျးကလေးကို ခဈြကွိုကျမိသောကွောငျ့ ပိုကျဆံမြားကုနျသှားခဲ့သညျ့ အသကျ၇၀အရှယျ ဘီလြံနာသူဋ်ဌေးကွီး အသက်၇၀အရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ ဖူကျန်းပြည်နယ်မှ ဘီလျံနာအဖိုးအိုတစ်ဦးဟာ သူ၏ဇနီးသည်သေဆုံးသွားခဲ့သောကြောင့် တစ်ယောက်တည်းအထီးကျန်နေခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ဘဝ၏ကူဖော်လောင်ဖက်တစ်ဦးကို ရှာဖွေနေခဲ့ချိန်တွင် လိုင်းပေါ်မှတစ်ဆင့် အသက်၃၅နှစ်အရွယ် ဘဏ်မန်နေဂျာ မိန်းမလှလေးနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ရပါတယ်။ ထို့နောက်စကားများပြောကြည့်ပြီး ၃ ရက်အကြာတွင် ချစ်သူရည်းစားများဖြစ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ ရည်းစားဖြစ်ပြီး မကြာမီအချိန်မှာဘဲ အမျိုးသမီးဟာ ကားလုပ်ငန်းတစ်ခုတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်ဟုဆိုကာ VND နှစ်ဘီလီယံကို တောင်းခံခဲ့ပါတယ်။ သူဋ္ဌေးကြီးဟာလည်း အမျိုးသမီးကို ယုံကြည်ကာ ထုတ်ပေးခဲ့မိပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတွင် ကောင်မလေးဟာ အမျိုးမျိုးအကြောင်းပြပြီး များပြားလှသောငွေကြေးများကို အမြဲတောင်းခံနေခဲ့ပါတယ်။ ကြာလာသောအခါ ကောင်မလေးဟာ အဆက်အသွယ်ဖြတ်ပြီး အဖိုးအိုကိုထားသွားခဲ့ပါတယ်။ အဖိုးအိုဟာ ရဲများကို အကူအညီတောင်းထားပြီး ရဲများဟာလည်း စုံစမ်းမှုများကို လုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်ဟု သိရပါတယ်။ Unicode Version ခွောမောလှပတဲ့ … Read more
တခြို့တှရေဲ့ဘဝတှကေ ရငျနာစရာကောငျးလောကျအောငျထိ အကြိုးပေးနညျးရှာကွပါတယျ စာနာပေးကွပါ
“ဗိုက်ခွဲထားလျက်နဲ့ စပါးတွဲတွေ လည်ရောင်းနေရတဲ့အဒေါ်ကြီးတို့သားအမိ” ဗိုက်ခွဲထားတဲ့ကြားထဲက စပါးတွဲတွေ လည်ရောင်းနေရတဲ့အဒေါ်ကြီးပါ။ သားငယ်လက်ကို မြဲမြဲကိုင်ထားပြီး သားငယ်လေးကလည်းမိခင်ရဲ့လက်ကို အားကိုးတကြီး ကိုင်ထားတယ်။ဆေးဖိုးနဲ့ သားလေးအတွက် စားဖို့ရှာနေရတာလို့သိရပါတယ်။ လှိုင်သာယာ သမာကုန်း ကျွန်းကြီးရွာကနေ တောင်ဒဂုံ အထိ လိုင်းကားစီးပြီး လာရောင်းတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မိုးစက်ကအဒေါ်ကြီး စပါးတွဲတွေ ဆက်ထမ်းနေရမှာစိုးလို့စပါးတွဲ အကုန်လုံးကို ၇သောင်း ကျပ် ပေးပြီး ဝယ်လိုက်ပါတယ်။အဒေါ်ကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါ ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ဖို့ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ Photo-Moesat #36myanmarchannel Unicode Version “ဗိုကျခှဲထားလကျြနဲ့ စပါးတှဲတှေ လညျရောငျးနရေတဲ့အဒျေါကွီးတို့သားအမိ” ဗိုကျခှဲထားတဲ့ကွားထဲက စပါးတှဲတှေ လညျရောငျးနရေတဲ့အဒျေါကွီးပါ။ သားငယျလကျကို မွဲမွဲကိုငျထားပွီး သားငယျလေးကလညျးမိခငျရဲ့လကျကို အားကိုးတကွီး ကိုငျထားတယျ။ဆေးဖိုးနဲ့ သားလေးအတှကျ စားဖို့ရှာနရေတာလို့သိရပါတယျ။ လှိုငျသာယာ သမာကုနျး ကြှနျးကွီးရှာကနေ တောငျဒဂုံ အထိ လိုငျးကားစီးပွီး လာရောငျးတာလညျးဖွဈပါတယျ။ မိုးစကျကအဒျေါကွီး စပါးတှဲတှေ … Read more
ကလေး ၈ရကျသားလေးနဲ့ မိခငျကိုမှ လမျးပျေါထှကျတောငျးခိုငျးရတယျလို့ဗြာ
“ ကလေး၈ရက်သားလေးနဲ့ မိခင်ကိုမှ လမ်းပေါ်ထွက်တောင်းခိုင်းရတယ်လို့ဗျာ…. ” ခုထိ ဘာမှမစားရသေးဘူးဆိုလို့ နီးတဲ့ဆိုင်ခေါ်ထိုင်ပြီး ထမင်းကျွေးလိုက်တယ်… ဒီနေ့ ၂သောင်းမှ မပေးရရင် အိမ်ပေါ်က ဆင်းရမယ်ဆိုလို့ ကလေးအမေကို ထွက်မတောင်းခိုင်းဖို့ ကတိပေးခိုင်းပြီး ၁သောင်း ပိုပေးလိုက်တယ်… အားလုံး ၃သောင်းပေးလိုက်တယ် ရန်ကုန်မှာ နေစရာမရှိလို့ ကားဂိတ်ခုံပေါ်တွေ လမ်းဘေးပလက်ဖောင်းတွေမှာ အိပ်နေသူတွေ တစ်ပုံကြီးပဲ စားစရာပါမရှိတော့ လမ်းဘေးထွက်တောင်းကြရတာပဲလေ ဘဝဆိုတာ ဒုက္ခတွေနဲ့ပါ လို့ ပြောရမလိုဖြစ်နေပြီ ကလေးအဖေက ခြေတစ်ဖက်မသန်ဘူး တောင်းစားတဲ့အလုပ်ပဲ လုပ်ကျွေးနေရတာတဲ့ အမေက ART ဆေးသောက်နေရသူ ကလေးကို နို့မတိုက်ပဲ နေရမှာ နို့မှုန့်ဖိုးမတတ်နှိင်လို့ မိခင်နို့ပဲတိုက်နေရတယ်တဲ့ ကလေးက ၈ရက်သားလေး ရုပ်ချောချောလေး ကလေးကို သနားလွန်းလို့ ကူညီကြပါဦး အိမ်လခပေးဖို့နဲ့ ကလေးနို့မှုန့်ဖိုးလေး တတ်နှိင်သလောက်လေးပေါ့ ၅ထောင် … Read more
သမီးပျိုလေး (၃)ယောက်ရှိတဲ့မိသားစု ပြည့်တန်ဆာအိမ်က သာလိကာကို ဝယ်မွေးမိလိုက်သောအခါ
သမီးပျိုလေး (၃) ယောက်ရှိတဲ့ မိသားစု ပြည့်တန်ဆာအိမ်က သာလိကာကို ဝယ်မွေးမိလိုက်သောအခါ… မလာတာနော်.. ပြည့်တန်ဆာ အိမ်က သာလိကာ အိမ်ထောင်စုတခုမှာ အိမ်ထောင် ဦးစီးက ကိုဖေကျင် တဲ့။ သူ့ဇနီးက မယဉ်မြ ပါ။ သူတို့မှာ သမီးပျို ၃ယောက်ရှိတယ်။ နေ့လည်နေ့ခင်းဆို အိမ်မှာ မယဉ်မြ တယောက် တည်း ပျင်းနေရတယ်။ ကိုဖေကျင်က အလုပ်ကြီး အကိုင်ကြီးသမားမို့ တနေကုန် အလုပ်သွား။ သမီးပျိုတွေကလည်း အထက်တန်းနဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတွေဆိုတော့ ကျောင်း သွားကြတာကိုး။ ဒါနဲ့ မယဉ်မြက နေ့လည်ခင်း အပျင်းပြေအောင် ဆိုပြီး အိမ်မှာ စကားပြော တတ်တဲ့ ကြက်တူရွေး။ ဒါမှမဟုတ် သာလိကာတကောင် ဝယ်မွေးထား ရင် ကောင်းမှာပဲလို့ အကြံရတယ်။ ဒါနဲ့ ငှက်အရောင်းဆိုင်ကို … Read more
မကျြရညျတှဝေဲနတေဲ့ အသကျ(၇၀)ကြျောအဖိုးအိုနဲ့ ဘတျဈကားပျေါက ဖွဈရပျ…
ဒီနေ့ ဂုဏ် သိက္ခာနဲ့မေတ္တာတရား ကိုလဲလှယ်ခဲ့တယ်… Busကားပေါ် ကျွန်မ တက်သွားတော့ လက်ထဲမှာပိုက်ဆံ၂ထောင် ပါလာတယ်….။ အလုပ်မှာထမင်းစားမှာက1800 ကားခက၂၀၀..ကွက်တိ ။ကားပေါ်မှာရှေ့ဆုံးခုံမှာနေရာရတယ်….။ အဲ့ဒီမှာ..ချောင်လေးမှာကုတ်ကုတ်လေးနဲ့..မျက်ရည်တွေဝဲနေတဲ့. အသက်(၇၀)ကျော်ခန့် ရှိတဲ့အရမ်းဆင်းရဲချို့တဲ့ပုံရတဲ့အဘိုးတစ်ယောက်ကို သွားတွေ့တယ် … ။ ကိုယ့်ေ ဘးမှာထိုင်နေတဲ့သူတွေ ကိုဝေ့ဝဲကြည့်လိုက်တော့အသက်ခပ် လတ်လတ်ပိုင်းတွေအများကြီး.. သူတို့ကို အာ့အဘိုးအိုကြီးကိုမမြင်ကြဘူးလားဆိုတဲ့အကြည့်မျိုးနဲ့ အားမနာတမ်းကြည့်ပလိုက်မိတယ်။ တချို့ဆိုအဲ့အဘိုးအိုခြေထောက်တွေတောင်တက်နင်းကြတယ်။ဘေးနားကအန်တီကြီးကိုမေးကြည့်တော့ အဲ့တာ သူတောင်းစားကြီးလေ ဘယ်သူကသူ့ကိုခုံပေးမှာလဲရွံဖို့လဲကောင်းတာကိုးတဲ့… ကျွန်မ မစဉ်စားတော့ပဲချက်ခြင်းထပြီး ပါလာတဲ့ပိုက်ဆံ၂ထောင်လုံးပေးပြီး.. “ဘဘ လာ သမီးခုံလာထိုင်ဆိုပြီးတွဲခေါ်ပေးလိုက်တယ်…။ စိတ်ထဲမှာလဲ ငါ့အဖေအမေသာဆိုရင်ဆိုတဲ့အတွေးတွေ နဲ့မျက်ရည်တောင်ဝဲတယ်။ ကားခ၂၀၀မရှိလို့ပါဆိုပြီးပြော စီးလာတယ်။ကားပေါ်မှာအသိတွေလဲပါကောင်းပါနိုင်တယ်… ဒါမယ့်မရှက်ပါဘူး..အခုစာရေးနေတဲ့အချိန် ကျွန်မဖျားနေတယ်လေ…. အစာလွန်ပြီးဗိုက်တွေအောင့်လို့…ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျေနပ်မိတယ်…။ မူရင်း shinnkhyant Unicode Version ဒီနေ့ ဂုဏျ သိက်ခာနဲ့မတ်ေတာတရား ကိုလဲလှယျခဲ့တယျ… Busကားပျေါ ကြှနျမ တကျသှားတော့ လကျထဲမှာပိုကျဆံ၂ထောငျ … Read more
မိန်းမခိုးမည့်ညမှာ ဆက်ဖီဆွဲတတ်လွန်းတဲ့ ညီမသိသွားလို့ နွားဖြစ်မှန်းသိလိုက်ရတဲ့အဖြစ်….
မိန်းမခိုးမည့်ညမှာ ဆက်ဖီဆွဲတတ်လွန်းတဲ့ ညီမသိသွားလို့ နွားဖြစ်မှန်းသိလိုက်ရတဲ့အဖြစ်… “ကိုရီး ကုပ်ချောင်းချောင်းနဲ့ ဘာလုပ်နေတာလဲ” “ငင် … ” လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ကျုပ်ညီမဗျ အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ သူ့အခန်းထဲကထွက်လာတယ်… ” နင်ခုထိ မအိပ်သေးဘူးလား ” “အိပ်မက်ထဲမှာ ကိုရီး မိန်းမသွားခိုး မယ်လို့ မက်လို့ လန့်နိုးလာတာ ” ” ငါ့နှယ် အဲဒါမက်တာနဲ့ လန့်နိုးစရာလား ” ” နိုးတာပေါ့ ကိုရီးနဲ့ညားပြီး ဘယ်ငတိမ ကံဆိုးမလဲပဲ စိတ်ပူနေရတာ ” ” ငိမ့် … ” မောင်နှမ အချင်းချင်းတောင် ကပ်ဖဲ့နေသေးတယ် “ကလေးနေရာ ကလေးနေစမ်းပါဟာ သွားအိပ်တော့ ” “ဒါနဲ့ ကိုရီးက ဘယ်သွားမှာလဲ” “အဟိမ်း ” (ပီတိသံကြီးနဲ့ ) … Read more
အိမျထောငျပွုတော့မယျဆိုရငျ အထူးဆငျခွငျသငျ့၊ရှောငျရှားသငျ့သညျ့ ကှာသုံးကှာ၊ ခြာသုံးခြာ၊ ပါသုံးပါ အကွောငျး
အိမ်ထောင်ပြုတော့မယ်ဆိုရင် အထူးဆင်ခြင်သင့်၊ရှောင်ရှားသင့်သည့် ကွာသုံးကွာ၊ ချာသုံးချာ၊ ပါသုံးပါ အကြောင်း… ကွာ သုံး ကွာ၊ ချာ သုံး ချာ၊ ပါ သုံး ပါဆို တဲ့ အကြောင်း ဗဟုသုတလေး ပါ လွတ်လပ် စွာ ရှယ်ယူ နိုင်ပါသည်။ “အိမ်ထောင်ပြု၊ ဘုရားတည်၊ဆေးမှင်ရည် စုပ်ထိုး၊ ကျောင်းထိုင်ပင့်၊မြတ်သံဃာ၊ စာချုပ်ရန်ခက်သည့်အမျိုး။” ဆိုတဲ့ ရှေးပညာရှိများ ဆိုမိန့်စကားရှိပါတယ်။ အရွယ်ရောက်လာကြသူ အမျိုးသား အမျိုးသမီးတိုင်း (အပျိုကြီး၊လူပျိုကြီးကလွဲရင်)အိမ်ထောင်ပြုကြ မှာဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ပြုကြတဲ့ အခါမှာလည်း မိဘပေးစား လို့ အိမ်ထောင်ပြုခြင်း၊ ကိုယ်အချင်းချင်း မေတ္တာမျှကြ လို့ အိမ်ထောင်ပြုခြင်းဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုပုံစုံမျိုးဖြင့် အိမ်ထောင်ပြုပြု အထူး ဆင်ခြင်သင့်၊ ရှောင်ရှားသင့်သည့် “ကွာသုံးကွာ၊ချာသုံးချာ၊ပါသုံးပါ” ကိုတော့ အထူးရှောင်ရှားကြပါလို့ ရှေးပညာရှိများက … Read more